Fitavozavozana sy dika vilana • AoRaha
Fitavozavozana sy dika vilana
Na ho loza amin’atambo tahaka ny inona aza no hiseho eto Madagasikara dia vahoaka tsy tan-dalàna ihany no hifanaretsaka eny an-dalam-be. Tsikaritra fa hamaivanin’ny sokajin’olona maro ity valanaretina « Coronavirus » ity. Tsindriana manokana eto anefa ny fitavozavozan’ny manampahefana isan-tokony amin’ny fampanajàna ny lalàna manan-kery. Manginy fotsiny ny fikorontanan’ny fandrindrana, tahaka izay hita amin’izao vanim-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana eto Antananarivo izao. Mazavazava ny toromarika sy fepetra raisin’ny fitondram-panjakana, saingy ireo mpanatanteraka eny an-kianja indray no mandika vilana.
Vao afak’omaly alina no niharan’izany ireo andiana mpanao gazety avy nanatanteraka ny asany, niaraka tamin’ny taratasy fahazoandalana ofisialy amin’ny fahafahana mivezivezy noho ny anton-draharaha izay nosoniavin’ny minisitra, kanefa dia filàm-baniny naharitra no nataon’ireo mpitandro filaminana vao namela azy ireo hamonjy fodiana.
Sanatria raha hanao tsinontsinona ny fandrarana mifamoivoy amin’ ny alina, fa mahazendana tanteraka kosa ny fahamaroan’ireo olona mbola mifanerasera amin’ny andro antoandro, tsy misy ahiana toy ireny andavanandro ireny ary dia mitazam-potsiny ireo mpitandro filaminana.
Na hamerimberina sy hanamafy tahaka ny ahoana an’izay fepetra raisina hatramin’ny Filohan’ny Repoblika aza, dia ho sasa-poana ihany izao paikadin’ny fanjakana ho fisorohana ny fihanaky ny aretina « Coronavirus » eto amin’ny tany sy ny firenena izao. Sao hanondraka rano an-damosin-gana ihany ireo minisitra sy tompon’andraikipanjakana samihafa mifandimby manao fampahafantarana sy fanentanana amin’ireo haino aman-jery maro, isaky ny antoandro.
Asa izay mba fiakaran’ny tahan’ny olona manasa tanana amin’ny savony; na ireo manampim-bava amin’ny lanton-tsandry isaky ny mievina sy mikohaka; na ny elanelana iray metatra eny ankalamanjana mila hajain’ny olon-drehetra… fa mampanahy raha ny tsy firaharahian’ ny maro an’ilay fihibohana an-trano, amin’izao fotoana izao. Tsy amin’ny dingan’ny fiandrasana na fiandrandrana ny fahatongavantsain’ny tsirairay intsony isika ry fanjakana: porofoy ny fahefanareo; ampiharo araka ny tokony ho izy ny lalàna; ampianaro ny tokony hataony ireo mpanatanteraka eny an-kianja mba tsy hanaonao foana satria misy toa tsy mahazo ny dikan’ny soratra ofisialy sy ny baiko tsy maintsy hoarahina. Hiteraka fahavoazana goavana ny fitavozavozana sy ny dika vilana, raha izao toe-javatra izao no mitohy.